[09 / 10 / 2019] Indigenous jar transformer la malaayiin Euro in ay sii joogaan dalka Turkiga	34 Istanbul
[09 / 10 / 2019] DHMİ 9 waxay ku dhawaaqdaa Sawirro bille ah	06 Ankara
[09 / 10 / 2019] Ururka Isboortiga Qaranka ee Duullimaadyada Diyaaradaha ee Magaalada Istanbul	34 Istanbul
[09 / 10 / 2019] Tallaabooyin dheeri ah oo looga soo horjeedo shilalka IETT Metrobus	34 Istanbul
[09 / 10 / 2019] Khadkii Tareenka ee Bursa ma ahan mid dhakhso badan 'Heerar Sare'	16 Bursa
[09 / 10 / 2019] 'Taariikhi Taariikhi ah ee Hejaz oo ay la socoto Dukumiintiyo Muujinaya Ser Exhibition Heeld in Jordan	962 Jordan
[09 / 10 / 2019] Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee Bursa Ankara Maxaa dhacay? ..	06 Ankara
[09 / 10 / 2019] 3. Madasha Caalamiga ah ee metrooga ayaa ka furmay Ankara Ato Congresium	06 Ankara
[09 / 10 / 2019] Tareenka Eurasia ee 2021 Markii Ugu Horaysay ee Konya	42 Konya
[09 / 10 / 2019] Gawaarida Volkswagen waa loo dhaqaajin doonaa sidan oo kale	26 Eskisehir
HomeTURKEYGobolka Marmara41 KocaeliMuwaadiniinta Kocaeli Oo Lagu Faraxeeyey Mobilka Mobilada
08 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 41 Kocaeli, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Gobolka Marmara, TURKEY 0
Muwaadiniinta kocaelide waxay ku qanacsan yihiin joogsiga mobilada
Joojinta guur guura ayaa laga dhisayaa Salim Dervişoğlu Street, kaas oo ka duwan wadada D-100, halkaasoo gaadiidka dadweynaha loo adeegsado degmooyinka Kocaeli ee Karamürsel, Gölcük iyo Başiskele. Muwaadiniintu waxay muujinayaan sida ay ugu faraxsan yihiin saldhigga cusub ee wareega ee laga dhisay Adnan Menderes overpass ee Izmit, taasoo u fududeynaysa rakaabku inay qaadaan oo kala soo degaan gaadiidka dadweynaha. Dhismihii ugu horreeyay ee moobiillada ay ka dhisto degmada Kocaeli Metropolitan ee saddex meelood ayaa la dhammeystirey, halka dhismaha Mimar Sinan iyo jeebabka Turkgut Özal ay sii socdaan.
JADWALKA DADWEYNAHA EE WAAJIBAADKA Muwaadiniinta
Ku ballaarinta Salim Dervişoğlu Street marxalado, Kocaeli Magaalo-Weyne ayaa dhisaya jidad cusub oo guur-guura oo waddada ku yaal. Adnan Menderes overpass ayaa la dhammeystirey oo lasiiyay muwaadiniinta. Thanks to boosteejooyinka wareega ee cusub ee la dhisay, Başiskele, Gölcük iyo gaadiidka dadweynaha ee Karamürsel ayaa si fudud u soo dejisan kara una qaadi kara rakaabka. Muwaadiniintu si sahal ah ayey ugu fuulaan gaadiidka dadweynaha micnaheedu waa inay ku qanacsan yihiin joogsiga cusub ee mobilada. Marka la eego baaxadda shaqooyinka ay sameeyeen kooxo ka tirsan Wasaaradda Sayniska, dhismaha mooto-gacmeedka wareega ee laga dhisayo meel ku xigta Mimar Sinan iyo Turgut Özal overpass Bridges ayaa sii socota.
WAA INAAN HELI KARAA ADEEGYADA DIIWAAN-GALINTA GAADIIDKA ”
Levent Karagöz (40) wuxuu caddeeyey inuu ka shaqeynayay Başiskele isla markaana uu adeegsaday Halkevi Stop halka uu ku safrayey inta u dhaxaysa İzmit iyo Başiskele. Tani waxay sababtay ciriiriga taraafikada. Way fiicneyd in jeebabka laga sameeyo. Waxaan ugu hambalyeynaynaa degmadeena maadadan. Daraasaddan, gobolkan wuxuu noqday mid caadi ah oo sifiican wax u barta. Wadada weyn ee halkaan ma guuldaraysato. Shaqadan, waxaan bixinaa adeeg joogto ah oo gaadiid ah. ”
“WAQTIGII UGU HAMBANAY EE AAN BADAN LAHAYDna waan jeclaaday”
Hawlgabnimada Cevdet Göçlü (74) wuxuu cadeeyay inuu adeegsaday saldhiga mobilada markii ugu horeysay uuna aad u jeclaaday. Shilalka taraafikada ee halkan ka dhici kara waa laga hortagay. Daraasaddan, labada rakaab waxay si sahlan ugu fasixi karaan gawaarida gawaaridu way kici karaan oo si fudud ayey u joojin karaan. Waxay ahaan jirtay buundada dhexdeeda gawaaridaana waxay istaageen bartamaha waddada. Hadda rakaabkii iyo basaskiiba waa ay is degeen. Waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo Dawladda Hoose ee Magaaladda ”.
Muwaadiniintu waxay ku qoslaan wajiyada qadarinta ee Kadikoy-Kartal Metro 03 / 09 / 2012 Wajiyadu waxay ku qoslaan xariiqda mitrooga 17 Bishii Agoosto, oo ay furay Ra'iisal Wasaare Erdogan "Kadikoy - Kartal Metro" rakaabka waxay ku faraxsan yihiin inay safraan. 32 oo keliya oo dhulka hoostiisa ah oo aan ka fogeyn taraafikada ka soo jeeda Kartal ilaa Kadikoy ayaa ku dhawaaqay in ay gaarayaan dadka reer Aasiya ee ku yaalla Kaynarca si ay u sugaan Garoonka Saxaafada iyo Xiriirka Xiriirka Dadweynaha ayaa aragtay rakaabka tareenada. Halkan waa sawirka rakaabka ee Kadikoy - Kartal Metro, Tevfik Eraslan (BANKER) Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan fursad u helay caruurtayda. Waxaan waday wade sababtoo ah gaadiidka dadweynaha kale kuma haboonayn isticmaalka qoyska. Waxaan ku qaatay kharashka baabuurta la dhigto muddada aan baabuur waday
New Ankara YHT Station oo ku xiran Dolup Muwaadiniinta 01 / 11 / 2016 New Ankara YHT Station Istaagay Dolup Muwaadiniintu Ku Qanacsanyihiin: New Ankara YHT Station dhalinyaro, waayeel, arday, sarkaal ayaa ka soo wada jeeda dhammaan qaybaha. Muwaadiniinta ayaa adeeg buuxa u siiyay adeegga weyn ee madaxweyne Erdogan furay duulimaadkii Ankara YHT ee la qorsheeyay ee la qorsheeyey. Rakaabka oo u yimid Ankara YHT Station si ay u kobciyaan dhismaha caasimadda ayaa sheegay in ay ku qanacsan yihiin adeegga la bixiyey. "Ankaralılar adduunka ayaa xarun YHT ku yaalla mashaariicda ugu weyn," station Taasi waa calaamad muujinaysa cad in dhamaadka xilli dalka Turkiga, "ayuu yiri. Taariikhda Citizens markii idaacadda cusub waxaa la dhisay iyada oo aan taabashada Ankara tareen Station ah, Ankaray, in lagugu xiro oo la kala iibsiga si BAŞKENTRAY iyo Keçiören Metro sidoo kale waa ku faraxsanahay in ay leeyihiin.
Baaskiilayaasha ayaa aad ugu faraxsan baabuurka cusub ee fiilada 24 / 06 / 2014 Dadka baaskiilka waa aad ugu faraxsan baabuur cable cusub: baabuur cable cusub mar kale ka hawlgala todobaadkii hore, kuwa doonaya in ay soo booqdaan Uludag, awelna loola bisikletsever iyo sidoo. Baabuurta cusub ee telefishinka cusub waa doorashada dadweynaha iyo sidoo kale kooxaha baaskiilka. Teferrüç wuxuu qaadanayaa neefta kooxo doonaya in ay qiimeeyaan fasaxyada isbuuca iyagoo sameynaya isboorti. Uludag by baabuur cable in baaskiil ah, hadda u mahad celiyay degmada sheegaya in sii dhibaato jir. Baaskiilada for 10 £ dulsaar, halka kooxaha baaskiil, "jir cable gaadhiga ku jiray qaadashada 40 qof, ama baabuur kasta oo kale oo cable waxaan lahaa in ay sugto ilaa nus saac. Haddaba golaha qof noqon kartaa ilaa fuulaan oo aan sugin Sarıalan baaskiil ah, oo wuxuu ku yidhi," ku qanacsan tahay ...
Sidee buu qofku ugu qanacsan yahay Tareenka Xawaaraha Sare? 03 / 10 / 2012 Ugu horreyntii, Ankara-Eskisehir iyo ka dibna line Ankara-Konya ee sahanka ugu dambeeyay ee dadweynaha ee YHTs ayaa galay natiijooyin xiiso leh. Railways waxay bilaabeen inay la kulmaan ereyga dahabiga ah ee Tareenada Xawaaraha Sare (YHT). Ugu horreyntii, Ankara-Eskisehir iyo ka dibna xaruntii Ankara-Konya ee YHTs ayaa loo adeegsaday. Sannad ka dib, halka Marmaray iyo Isku-xirka YHT ee Eskisehir-Istanbul loo qorsheeyay in la galo adeeg, dhismaha xarun Ankara-Sivas YHT ayaa sii socota. Dhammaan mashaariicda mashaariicda tareennada ee Ankara-İzmir iyo Bursa ayaa la dhammeeyey. In kasta oo dhismaha mashaariicdan la qorsheeyay in ay si dhakhso ah u bilaabaan, baaritaankii ugu dambeeyay ee Wasaaradda Gaadiidka, Shaqaalaha Badda iyo Isgaarsiinta ee YHTs waxay keeneen natiijooyin xiiso leh. Research ...
Waa sidee qanacsanaanta muwaadinka YHT? 07 / 10 / 2012 Ugu horreyntii, Ankara-Eskisehir iyo ka dibna line Ankara-Konya ee sahanka ugu dambeeyay ee dadweynaha ee YHTs ayaa galay natiijooyin xiiso leh. Railways waxay bilaabeen inay la kulmaan ereyga dahabiga ah ee Tareenada Xawaaraha Sare (YHT). Ugu horreyntii, Ankara-Eskisehir iyo ka dibna xaruntii Ankara-Konya ee YHTs ayaa loo adeegsaday. Sannad ka dib, halka Marmaray iyo Isku-xirka YHT ee Eskisehir-Istanbul loo qorsheeyay in la galo adeeg, dhismaha xarun Ankara-Sivas YHT ayaa sii socota. Dhammaan mashaariicda mashaariicda tareennada ee Ankara-İzmir iyo Bursa ayaa la dhammeeyey. In kasta oo dhismaha mashaariicdan la qorsheeyay in ay si dhakhso ah u bilaabaan, baaritaankii ugu dambeeyay ee Wasaaradda Gaadiidka, Shaqaalaha Badda iyo Isgaarsiinta ee YHTs waxay keeneen natiijooyin xiiso leh. Research ...
Indigenous jar transformer la malaayiin Euro in ay sii joogaan dalka Turkiga
Hawlaha Isbeddelka Isbeddelka ayaa ka bilaabmay Altınkayı Boulevard
Duulimaadyada Metro Metro ee kusoo kordha Istanbul
Muwaadiniintu waxay ku qoslaan wajiyada qadarinta ee Kadikoy-Kartal Metro
New Ankara YHT Station oo ku xiran Dolup Muwaadiniinta
Sidee buu qofku ugu qanacsan yahay Tareenka Xawaaraha Sare?
Waa sidee qanacsanaanta muwaadinka YHT?
Rakaabka jimicsiga ayaan ku qanacsanayn baska tareenka
Eskişehir si ay u bilaabaan adeegga YHT ee Konya waxay ku faraxsan yihiin muwaadiniinta
Wadooyinka Takhasuska leh ee Ku Meel Gaara
Sincan-Kayaş suuqyada magaalada ayaa ku riyaaqay caasimadda
Dadka ka soo jeeda Kadikoy-Kartal Metro, oo markii ugu horeysey dadwaynuhu soo martay
News Archive Xulo bisha Oktoobar 2019 (154) Sebtembar 2019 (555) August 2019 (508) July 2019 (634) Juun 2019 (504) May 2019 (526) Abriil 2019 (418) Maarso 2019 (521) Febraayo 2019 (483) Janaayo 2019 (502) Range 2018 (620) Nofeembar 2018 (504) Oktoobar 2018 (435) Sebtembar 2018 (517) August 2018 (486) July 2018 (506) Juun 2018 (581) May 2018 (467) Abriil 2018 (545) Maarso 2018 (554) Febraayo 2018 (500) Janaayo 2018 (557) Range 2017 (509) Nofeembar 2017 (427) Oktoobar 2017 (538) Sebtembar 2017 (455) August 2017 (505) July 2017 (479) Juun 2017 (477) May 2017 (493) Abriil 2017 (434) Maarso 2017 (540) Febraayo 2017 (477) Janaayo 2017 (538) Range 2016 (487) Nofeembar 2016 (631) Oktoobar 2016 (657) Sebtembar 2016 (542) August 2016 (608) July 2016 (485) Juun 2016 (661) May 2016 (664) Abriil 2016 (700) Maarso 2016 (804) Febraayo 2016 (855) Janaayo 2016 (751) Range 2015 (799) Nofeembar 2015 (640) Oktoobar 2015 (624) Sebtembar 2015 (428) August 2015 (493) July 2015 (505) Juun 2015 (535) May 2015 (577) Abriil 2015 (622) Maarso 2015 (1017) Febraayo 2015 (878) Janaayo 2015 (1077) Range 2014 (963) Nofeembar 2014 (826) Oktoobar 2014 (771) Sebtembar 2014 (598) August 2014 (808) July 2014 (911) Juun 2014 (735) May 2014 (957) Abriil 2014 (972) Maarso 2014 (864) Febraayo 2014 (720) Janaayo 2014 (733) Range 2013 (664) Nofeembar 2013 (656) Oktoobar 2013 (548) Sebtembar 2013 (570) August 2013 (533) July 2013 (661) Juun 2013 (577) May 2013 (734) Abriil 2013 (1059) Maarso 2013 (1102) Febraayo 2013 (811) Janaayo 2013 (906) Range 2012 (911) Nofeembar 2012 (1168) Oktoobar 2012 (830) Sebtembar 2012 (886) August 2012 (974) July 2012 (863) Juun 2012 (591) May 2012 (445) Abriil 2012 (563) Maarso 2012 (699) Febraayo 2012 (546) Janaayo 2012 (417) Range 2011 (149) Nofeembar 2011 (35) Oktoobar 2011 (23) Sebtembar 2011 (18) August 2011 (25) July 2011 (18) Juun 2011 (16) May 2011 (13) Abriil 2011 (13) Maarso 2011 (33) Febraayo 2011 (24) Janaayo 2011 (13) Range 2010 (335) Nofeembar 2010 (12) Oktoobar 2010 (15) Sebtembar 2010 (12) August 2010 (16) July 2010 (9) Juun 2010 (19) May 2010 (6) Abriil 2010 (3) Maarso 2010 (62) Febraayo 2010 (303) Janaayo 2010 (1838) Range 2009 (4) Nofeembar 2009 (1) Oktoobar 2009 (3) Sebtembar 2009 (3) August 2009 (2) Juun 2009 (3) May 2009 (2) Abriil 2009 (3) Maarso 2009 (9) Febraayo 2009 (4) Janaayo 2009 (3) Nofeembar 2008 (1) Oktoobar 2008 (1) Sebtembar 2008 (2) August 2008 (1) July 2008 (2) Juun 2008 (2) May 2008 (2) Abriil 2008 (1) Maarso 2008 (3) Febraayo 2008 (5) Janaayo 2008 (2) Range 2007 (2) Oktoobar 2007 (2) July 2007 (1) May 2007 (1) Abriil 2007 (1) Febraayo 2007 (2) Janaayo 2007 (1) Range 2006 (1) Oktoobar 2006 (3) August 2006 (1) Juun 2006 (2) May 2006 (2) Abriil 2006 (2) Maarso 2006 (2) Nofeembar 2005 (2) August 2005 (1) Juun 2005 (1) Maarso 2005 (2) Febraayo 2005 (1) Janaayo 2005 (1) Range 2004 (1) Oktoobar 2004 (3) July 2004 (1) May 2004 (2) Range 2003 (1) Oktoobar 2003 (1) May 2003 (1) Maarso 2003 (1) Febraayo 2003 (1) Janaayo 2003 (1) Range 2002 (1) Oktoobar 2002 (4) August 2002 (1) Abriil 2002 (1) Maarso 2002 (2) Janaayo 2002 (2) July 2001 (1) Juun 2001 (1) Maarso 2001 (1) May 2000 (3) Maarso 1999 (1) Oktoobar 1998 (2) Maarso 1998 (1) August 1997 (1) Oktoobar 1996 (1) August 1996 (2) May 1995 (1) August 1992 (1) May 1990 (1)